Barcelona oo dib u soo noolaysay xiisaha ay u qabto xiddiga Manchester United ee Juan Mata | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Barcelona oo dib u soo noolaysay xiisaha ay u qabto xiddiga Manchester...
Barcelona oo dib u soo noolaysay xiisaha ay u qabto xiddiga Manchester United ee Juan Mata
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay dib u soo ceshato xiisaha ay u qabto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United Juan Mata .
33-sano jirkaan ayaa 151-daqiiqo u saftay Red Devils tartamada oo dhan ilaa haatan xilli ciyaareedkan, kaliya seddex kulan ayuu saftay, mana jiro wax kulan ah oo Premier League ah.
Qandaraaska Mata ee Old Trafford ayaa dhacaya dhamaadka xiliciyaareed kaan, isagoo saxiixay heshiis kordhin hal sano ah xagaagii lasoo dhaafay, waxaana uu xor u yahay inuu wadahadalo la furo kooxaha dibadda laga bilaabo 1-da Janaayo.
Barcelona ayaa isku dayday inay la soo wareegto Mata ka hor inta uusan qalinka ku duugin heshiis kordhintiisa sannadkii hore, Daily Star ayaana warineysa inay qorsheynayaan inay dalab kale ka gudbiyaan xiddiga reer Spain.
Man United waxay u furan tahay inay iska iibiso Mata mushaarkiisa 130,000 ee ginni bisha Janaayo, laakiin waxay doonayaan inay dib u soo ceshadaan qiimaha suuqa kala iibsiga halkii ay kansali lahaayeen heshiiskiisa lix bilood ka hor.
Mata ayaan ka ciyaarin La Liga in ka badan toban sano, tan iyo markii uu ka tagay Valencia kuna biiray Chelsea 2011kii.
Madaxweynaha Barcelona Laporta oo ka hadlay iibinta Frenkie De Jongee Man Utd iyo Man City
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: ergorapido classic laddare
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha Caawa oo aad Habeen kasta kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com Tababaraha reer Talyaani ee Real Madrid Carlo Ancelotti,...
Napoli oo ka cabsnaysa xiisaha ay Barcelona u qabto Kalidou Koulibaly.
DEG DEG: RUUSHKA OO WACADKU MARAY INUU UKRAINE KALA GOYN DOONO
DF oo shaacisay inay tallaabo adag ka qaadeyso maleeshiyaadka Waqooyiga Muqdisho
Rangnick oo ka hadlay dib u soo laabashada Pogba iyo Fursadaha...
Sawirro: Saadaq Joon oo loo doortay xildhibaan Golaha Shacabka
Farmaajo oo war kasoo saaray weerarkii Villa Hargeysa iyo dilka Abwaan...
Tottenham Hotspur oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqeysa saxiixa Antoine...